आफैले छिनाएको पत्नीको टाउको बोकेर प्रहरी कार्यालय पुग्ने व्यक्ति यिनै हुन् | Samacharpati.com – A Complete News Portal From Pokhara Nepal
आफैले छिनाएको पत्नीको टाउको बोकेर प्रहरी कार्यालय पुग्ने व्यक्ति यिनै हुन्
प्रकाशित मिति: 2074 श्रावण6शुक्रबार(July 21, 2017) 1:11 PM बजे Posted By: Samachar Pati
काठमाडौँ । असार ६ गते १० बजे राति । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरु खाना खाएर निदाउने तरखरमा थिए । प्रहरी कार्यालयको गेट नजिकैको प्रहरी सेन्ट्री पोस्टमा महिला प्रहरी जवान हतियारसहित नियमित ड्युटीमा थिइन । अकस्मात् राति साइलक चढेका एकजना मानिस चौकीअघि देखिए । उनी थिए– कोहलपुर नपा–४ का २९ वर्षीय मोहम्मद अफताव बेडुवा ।
उनी प्रहरी कार्यालयमित्र प्रवेश गर्न खोजे । राति प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि महिला प्रहरी जवानले उनलाई रोकिन् र सोधपुछ गर्न थालिन्, ‘को हौं तिमी ? यति राति कनि यहाँ आएको ?’
अफताफले जवाफ फर्काए, ‘म आत्मसमर्पणका लागि आएको हुँ । मैले आफ्नी जेठी श्रीमतीको टाउको काटेर मारिदिएँ । नपत्याए टाउको बोकेर सँगै ल्याएको छु ।’ उनको जवाफबाट ती महिला प्रहरी अवाक भइन् । बोल्नै सकिनन् । उनले आत्तिदै सहकर्मीहरुलाई खबर गरिन् । प्रहरी जवानहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक सुरेशराज काफ्लेलाई खबर गरे । घटना सुनेपछि काफलेले पनि तत्काल विश्वास गर्न सकेनन् । उनले साइकलको क्यारियरमा राखिएको कपडाको पोका खोल्न लगाए । नभन्दै रगतले लत्पतिएको एक महिलाको टाउको कपडामा बेरिएको अवस्थामा भेटियो । उक्त टाउको कोहलपुर–४ की २७ वर्षीया गुलसन बेडुवाको थियो ।
आफताफ ६ छोराछोरीको अामा तथा आफ्नै श्रीमतीको हत्याको पुष्टि गर्न छिनाएको टाउको लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका रहेछन् ।
‘कस्तो अचम्मको घटना ? उसले सुरुमा टाउको ल्याएको छु भन्दा पत्याउँनै सकिनँ । अपराध गरेपछि अपराधीहरु भाग्छन् । उसले टाउको लिएर आएको छु भनेपछि पत्याउनै गाह्रो भयो । बेरिएको कपडा खोलेर हेर्दा उसकै श्रीमतीको टाउको रहेछ ।’ डिएसपी काफ्लेले भने, ‘त्यसपछि भने पत्याउन बाध्य हुनै पर्यो । अहिले उसलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुशन्धान गरिरहेका छौं ।’
हत्या पछि आफै पक्राउ दिएका आफताफका अनुशार उनकी जेठी श्रीमती गुलसन घरमा सधै कचकच गरिरहन्थिन् । उनकै कुरालाई लिएर घरमा सधै विवाद हुन्थ्यो । खेतिको समय भएकोले गाउँ सुनसान थियो । सधै झै त्यो रात पनि किचकिच हुन थालेपछि उनले श्रीमतीलाई तीन किलोमिटर पर लगे अनि १० बजे राति धारिलो चक्कुले उनको हत्या गरे । ‘कचकच नगरेको दिन थिएन । उसले मेरो ‘जीना हराम’ गरिसकेकी थिइ । त्यस दिन रिसको झोकमा मारी दिएँ । यति धेरै आवमगेमा आएँ कि टाउको समेत छिनिएछ । होसमा आएपछि घर पुगेँ । गाउँलेहरु सुतेका थिए । भागूँ कि भन्ने विचार आयो तर त्यस्तो गरिँन, आफताफले प्रहरी बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि टाउको कपडामा बेरेर साइकलको क्यारियरमा राखेँ अनि साइकल चढेर सिधै आत्मसमर्पणका लागि प्रहरी कार्यालयमा आएँ । मलाई जे सजाय भए पनि भोग्न तयार छु ।’
हत्या गरिएकी गुलसनका छ जना छोराछोरी छन् ।उक्त घटनापछि उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । पत्नी हत्याको आरोप लागेका मोहम्मद प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
साभार : साप्ताहिकबाट